DAAWO:-Jabhadda ONLF oo hubka dhigtay | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Jabhadda ONLF oo hubka dhigtay
DAAWO:-Jabhadda ONLF oo hubka dhigtay
Ururka ONLF oo heshiis la galay Dowladda Itoobiya iyo Ismaamulka Soomaalida ayaa ku dhawaaqay inay sameeyeen Hub ka dhigis, kaddib muddo labaatan sano ka badan oo ay u dagaalamayeen Xornimo doon
Magaalada Jigjiga ee xarunta Ismaamulka Soomaalida waxaa lagu qabtay munaasabad looga dhawaaqay inay ONLF ka mid noqotay dadka caadiga ah, Hubkii ay ku dagaalameysaynay ay iska dhigtay.
Hoggaanka ONLF ayaa madasha ka sheegay in tirada Ciidamada Hubka dhigtay ay gaarayaan 1,740, waxaana Hubkooda lagu wareejiyay Ismaamulka Soomaalida.
Madaxweyne Mustafa Cagjar ayaa sheegay in Ciidamada Hubka iska dhigay ay fursad u heystaan iney kala doortaan kamid noqoshada Shaqaalaha Dowladda ama Ciidamada Ismaamulka Soomaalida, si ay kaga shaqeeyaan danaha gobolka.
Bishii Agoosto ee 2018­kii ayey ONLF ku dhowaaqday Xabad Joojin hal dhinac ah, taasoo loo fasirtay iney tahay bilowga isu soo dhowaanshaha Dowladda Itoobiya iyo Jabhadan, taasoo soo dadajisay in Hogaankii ugu sareeya uu ka soo guuro magaalada Asmara.
ONLF oo tan iyo 1991-­dii udagaalameysa sidii shacabka Soomaaliyeed ee hoostaga xukuumada Addis Ababa u heli lahaayeen xorriyad ay isku maamulaan, ayaa sheegtay iney Ciidamadooda ay Hubka u dhigeen sidii ay door uga qaadan lahaayeen isbedelada Gobolka ka socda.
Munaasabadda lagu qabtay Jigjiga, ayaa waxaa ka qeybgalay mas’uuliyiin ka socday dhinaca dowladda Federaalka ah ee Itoobiya,hoggaanka Ismaamulka Soomaalida iyo Madaxda Ururka ONLF.
Xoogaga ONLF ayaa tan iyo bishii November sanadkii hore ku xareesan xero Ciidan oo ku taala meel banaanka ka ah Jigjiga, iyadoo heshiiska kaddibna loo fasixi doono qoysasooda si ay ula midoobaan.
1-dii bishii hore sanadkan 2019 ONLF ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay samaysanayaan xisbi siyaasadeed ka qeybgala doorashada Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Previous articleGolaha wasiirada Puntland oo lagu dhawaaqayo
Next articleDAAWO:-Canada Nin Masjid dad kulaayay oo 150 sano lagu xukumay +SAWIRRO
DAAWO:-Faysal Cali Waraabe Muuse waxaa lagu xasuustaa dagaalkii uu kuqaday C/raxman...
Sheekh Xasan Jaamici “Waxaan u nimid in qarax danbe uusan ka...